mairie-antananarivo – Fidinana Boriboritany Faha Enina
Fidinana Boriboritany Faha Enina
auteur 9 febroary 2017
Nitohy hatrany ny fidinan’ ny Ben’ny Tanana Lalao Ravaolamanana ka ny Alarobia 08 Febroary 2017 teo dia nidina tetsy amin’ny Boriboritany faha 6 izy niaraka ny ekipan’ny kaominina. ny Sefo Fokontany sy ny Solombavam-bahoaka. Nankasitraka ireo mponina sy ny Sefo Fokontany ary ny Delege ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana amin’ny fahadiovan’ny Tanana. Voalohany amin’ny fahadiovana ny Boriboritany faha-6 raha mitaha amin’ny Boriboritany hafa izay nandehanany, ary mbola nanentana ny Sefo Fokontany sy ny mponina izy mba ho tanterahana izay tsy vita.
Laharam-pahamehana ho an’ny Ben’ny Tanana ny fijerena ny tsena sy ny fandaminana,ka nijery ifotony tao amin’ny tsenan’Ambohimanarina sy ireo mpivarotra tao Ambohimiadana antsimo ary Betafo izy. Hisy ny fandaminana ny mpivarotra izay mbola ho tanterahana indrindra ny fizarana karatra ny mpivarotra ara-dalàna ao anaty tsena. Nanentana ny Sefo Fonkotany Ambohimanarina koa izy mba hanatsara ny biraony.
Nitsidika ny tsenan’Andranomena koa izy nanaramaso ireo “pavillon” rehetra ;ary tsy maintsy havaozina ny fifanarahana atao isam-bolana ; Hisy ny fanamboarana ny karatra mpivarotra ho izy.Teo koa ny fijerena ny tsenan’ny Fokontany Andranomena izay hita fa malalaka , mieritreritra ny Ben’ny Tanana fa hanatsara ity tsena ity izay ho atao manara-penitra hitoeran’ ireo mpivarotra rehetra. Mbola ho jerena ny taratasy sy ny mpiara-miombonan’antoka mialohan’izany.
Nitaraina kosa ny mpivarotra ao Betafo sy ny mponina Ambohimandroso fa mila amboarina ny lalana fa efa tena simba; 70 taona lasa no nisy ny fanamboarana farany, eo koa ny fitarainana amin’ireo lavaka maro rehefa avy ny orana noho izany dia hiezaka hiresaka amin’ny mpiara-miombon’antoka ny kaominina; Ohatra amin’izany ny AFD.
An-koatra izay dia nitsidika ny “bassin lavoir” teny betafo, Ambatolampy, Ambohimandroso koa izy ary nampanantena hanome aron’ ankanjo sy koveta azy ireo.